Xiriirka UEFA oo baaris ku haya Zlatan Ibrahimovic… (Waa maxay dambiga lagu heysto?) – Gool FM
Xiriirka UEFA oo baaris ku haya Zlatan Ibrahimovic… (Waa maxay dambiga lagu heysto?)
Ahmed Nur April 27, 2021
(Milano) 27 Abriil 2021. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa baaris xoog leh ku haya weeraryahanka kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic kaddib markii uu jebiyay mid ka mid ah xeerarka anshaxa ee xiriirka.
Sida laga soo xiganayo wararka ka imaanaya dalka Sweden, 39-jirka weerarka ka ciyaara ayaa la midoobay shirkad ka shaqeysa khamaarka.
Shuruucda anshaxa ee xiriirka UEFA ayaa sheegaya inaysan ciyaartoyda kubadda cagta ee kooxaha hoosta taga xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ka qayb qaadan karin ganacsiyada la xiriira khamaarka.
Marka laga soo tago baaritaanka UEFA ee ku qoroma Ibra, waxaa sidoo kale uu ganaax lacageed kala kulmay xiriirka kubadda cagta dalka Taliyaaniga ee magaciisa loo soo gaabiyo FIGC kaddib markii isaga iyo Romelu Lukaku ereyo aflagaaddo ah is weedaarsadeen intii ay socotay ciyaartii Inter iyo Milan ku dhex martay tartanka Coppa Italia bishii January ee sanadkan.
Zlatan ayaa garka loo suray ganaax lacageed oo gaaraya 4,000 oo euro una dhiganta 3,500 oo gini, halka Lukaku lagu ganaaxay lacag dhan 3,000 oo euro una dhiganta 2,600 oo gini.
Cristiano Ronaldo oo kala dooranaya ku biirista labo koox haddii Juventus ay usoo bixi weyso UCL... (Real Madrid sheekada kuma jirto)
RASMI: Bayern Munich oo burburisay heshiiska Hansi Flick... (Sababta keentay, & macallinka baddelka u noqonaya oo heshiis la gaaray Bavarians)